Post Welding Heat Treatment Machine nge-Induction, i-welding yokusiza kokucindezela
Ikhaya / Izinkampani Zokufudumala Emoyeni Zokuphuza / Induction Preheat Welding Machine
Induction Preheat Welding Machine
Isigaba: Izinkampani Zokufudumala Emoyeni Zokuphuza Tags: ukufakwa kwe-welding preheat welding, ukufakwa kwe-PWHT, post welding ukwelashwa ukushisa, preheat lokungeniswa kokushisa, preheat welding, ukwelashwa kwe-preheat welding, I-PWHT, Ukukhululeka kwengcindezi kwe-PWHT, Uhlelo lwe-PWHT, ukukhululeka kwengcindezi, ukucindezela usizo lokushisa lokushisa
I-MYD uchungechunge lwe-induction olusetshenziselwa ukushisa imishini isetshenziselwa i-weld, ukugoqa, ukubhebheza, ukugqoka, ukufaneka, ukukhululeka kokucindezeleka, ukushisa kwangaphambi kokushisa nokushisa kokushisa ngemuva kokushisa.
Ukupholisa umoya: ukusebenza kahle ku-10 ℃ -40 ℃
Amandla okushisa we-Induction: Ukushisa umsebenzi nomsebenzi ngengubo yokuvala okuzungezile. Isivinini sokushisa okuphezulu nokusebenza kahle kokushisa ngamandla amancane alahlekile.
I-PLC isithinta isikrini: Intuitive ukubona futhi kulula ukusebenza.
Ikhoyili ye-induction esebenzayo: Kulula ukuhamba ngomsebenzi ohlukile osebenzayo.
Ikhoyili ekhishwayo yokukhipha i-Induction coil: kulula ukuyisebenzisa nokuhamba.
Umshini wokushisa: Qopha lonke ijika lokushisa.
Isilawuli Sokushisa: Ukushisa ngokuya ngemininingwane yokushisa efudumele ngokubekezelelana kwe- ± 3 ℃
Ukushisa kuqala: Ukugqoka, ukugoba, ukufakela, ukungafaki, ukukhipha.
Ukwelashwa kwe-post-welding ukushisa: Tank, ubilisi noma ezinye imisebenzi zensimbi
Ukushisa: Ukushisa kweshidi le-Metal, Ukushisa kwesikhunta, i-shipboard, i-zinc bath, izingxenye zensimbi ezinkulu nezingajwayelekile
Ukushisa kwamaphayiphi: Amafutha empayipi, igesi yamaphayiphi, amanzi amathayipu, amapayipi e-petrochemical nezinye izinto zamaphayiphi
Ukuboniswa kweDivaysi bese ulungiselela imingcele, njengamandla okukhipha nokushisa okulungiselelwe.
Ukusebenza Okuphezulu: Amandla kagesi aguqulwa ngokuqondile emotshweni wokushisa okuphansi.
Isaziso sokuhluleka: Uma kwenzeka ukusebenza, i-alamu ezwakalayo ivuliwe futhi ibhokisi lesiphambeko liboniswa ku-PLC yokuthinta isikrini.
I-Design Module Design: Uhlelo luzinzile futhi luphansi kwezokugcinwa.
I-Digital Recorder enephrinta yokuzikhethela iyakwazi ukurekhoda idatha yokushisa nokudala izitayela zeshadi lezinqubekela phambili zokushisa.
Isilinganiso esifanele sokushisa: Amaphuzu amaningi okuthola ukushisa; Iziteshi ze-6 zokulawula ukushisa nge-± 3 ° C ukubekezelelana; Ukushisa okushisa.
I-Air Cool System ivumela uhlelo lokusebenza ukusebenza ngesimo: -30 º C ~ 50º C
I-IGBT Module: Sizivumelanisa ne-IGBT yezobuchwepheshe.
I-Smart Control: Yonke imisebenzi iyinkimbinkimbi encane futhi ilawulwa nge-PLC touch screen.
Kulula ukufaka: Ukuxhuma okusheshayo kokukhipha.
Kulula Ukuhamba: Ngokuphakamisa I-Eye noma I-Wheel System.
Iphephile: Ukuvikela okuzenzakalelayo kokuhluleka kwamandla.
Isixhumi Sonke: Amanzi-ubufakazi; Ukufakwa.
imodeli MYD-40 MYD-50 MYD-60 MYD-80 MYD-100 MYD-120
Isikhathi sokuphuma 2KHZ ~ 36KHz
Isisindo 130KG 136 KG 140 KG 145 KG 168 KG 180 KG
Usayizi 800 * 560 * 1350mm
emasakeni Usayizi 900 * 660 * 1560mm
MYD uchungechunge induction heat kuya compare ukumelana ukushisa:
Ukonga Amandla: 30-80%
Umshini wokwelashwa weld heat post | PWHT Equipment